Umlingisi uphumele obala ngokuxhashazwa abeThe Queen
NOKUBONGWA PHENYANE | October 8, 2019
INKAKHA yomlingisi wakuleli uVatiswa Ndara, ishiye engalazi kuNgqongqoshe wamaSiko amaCiko nezeMidlalo kuleli uMnuz Nathi Mthethwa, ikhala ngokungaphatheki kahle endimeni yezokulingisa.
UVatiswa okumanje ubonakala emdlalweni Ithemba noMuvhango, ukhale ngemali encane abanikwa yona ekubeni besebenza amahora amade beqopha.
Encwadini uVatiswa ayifake enkundleni yokuxhumana uTwitter, ukhala ngenkampani yabashadile bakwaFerguson, iFerguson Films.
Uthi kusuka namhlanje, bekuzoqala kuqoshwe isizini yesithathu yomdlalo owaba ngundabamlonyeni kuleli, Igazi.
UVatiswa uthe le ndoda nomkayo baveze ukuthi bazomnika imali enguR110 000, emalini okusazoxetshulwa kuyona intela.
“Ngangicele ukuthi banginike * -R1 million ngaphinde ngehla ngathi uR700 000 ulungile. Kwaleyo mali itholakala emuva kokuthi sekudlale iziqephu ezingu-13, esisuke siziqopha.
“Emuva kokusho imali engiyifunayo ngezwa sekubuzwa ukuthi yimuphi umlingisi ongafuna imali engaka, ezomgcina isikhathi eside eseqedile ukuqopha.
“Lokhu kwangenza ngathatha isinqumo sokuthi ngeke ngiphinde ngilingise indawo kaNomaRussia emdlalweni Igazi,” kuchaza uVatiswa encwadini.
Uthe uma sekuthathwe intela kuR110 000, ubezosala noR82 500.
“Kule mali engizoyithola ngalezi ziqephu ezingu-13, akumele ngibonakale ngiqopha omunye umdlalo kuze kube kuphela esimatasa ngawo.
Uma singakaqali ukuqopha kudingeka sithole usuku lapho sizoyohlangana khona silinganise izimpahla esizozigqoka kanjalo nokokuziphaqula, ngaso sonke leso sikhathi sethu esisichitha lapho akukho mali esiyitholayo. Siyacela ngqongqoshe thumekani njengoba kwasho uMengameli, yenzani kanjalo nasemacikweni,” kuchaza uVatiswa.
Uthe ufuna uNgqongqoshe nethimba lakhe bake babheke ukuthi kwamanye amazwe abalingisi abashutha amahora amade kusuka ngoLwesihlanu kuze kube uMgqibelo bahola malini futhi baphathwa kanjani.
“Lo mdlalo ube yimpumelelo amasizini womabili siwuqopha, ububalwa nemidlalo eyishumi ehamba phambili kwaMultichoice, kodwa ngalokho abalingisi ubungeke uzwe kuthiwa khona abazokuthola. Inkampani yakwaFerguson isifana nezinye ezibole phuhlu kulo mkhakha esikuwona. Siyacela Ngqongqoshe ukuthi ake kubukwe kahle izindaba zezinkontileka ezisayiniswa abalingisi ekugcineni ezivune ophrojusa,” kuchaza uVatiswa.
Uthe izinkinga ababhekana nazo kulo mkhakha zihohela ekutheni babizwe ngabantu abaziphakamisayo uma sebenqaba ukusebenza kweminye imidlalo.
“Laba bantu bahluleka ukusinika le mali nje kodwa ezinkundleni zokuxhumana baveza impilo ephezulu abayiphilayo, bagqoka izimpahla ezinamagama, banemizi emikhulu abahlala kuyona kanjalo nezimoto abazishayelayo ezohlobo oluphambili kodwa bahluleka ukusinika esikufunayo,” kuqhuba uVatiswa.
Okunye aphinde wakhala ngakho yizimo abasebenza ngaphansi kwazo, imiholo, ukuhlukunyezwa emsebenzini kwabalingisi njengoba bengenawo amalungelo abasebenzi njengabanye kuleli nokunye.
Abalingisi okukhona kubona uHlubi Mboya, Anga Makubalo, Talitha Ndima, Motlatsi Mafatshe, Renate Stuurman nabanye bashayele ihlombe uVatiswa ngokubhala le ncwadi nabo bazwakalisa ukuthi indima abakuyona ayilula neze.
UMthethwa uthe uyibonile incwadi futhi ifikile kuyena.
AbakwaFerguson abatholakalanga ukuthi baziphendulele ngalezi zinsongo ezibhekiswe kubona njengoba beseholidini e-USA.